RASMI: Inter oo ku dhawaaqday inay kansashay qandaraaska Christian Eriksen – Gool FM
RASMI: Inter oo ku dhawaaqday inay kansashay qandaraaska Christian Eriksen
(Milano) 17 Dis 2021. Inter Milan ayaa maanta oo Jimco ah ku shaacisay website-keeda rasmiga ah, inay kansashay qandaraaska Christian Eriksen iyadoo labada dhinac ay isla ogolaadeen, taasoo ka dhigan inuu gabi ahaanba ka tagayo Nerazzurri.
Christian Eriksen ayaa wadne xanuun ku soo booday inta lagu guda jiray ciyaartii ay ku wada ciyaareen xulkiisa Denmark iyo Finland kulan qeyb ka ahaa heerka guruubyada ee tartanka Euro 2020, dhacdadaas oo cabsi galisay caalamka, wuxuuna laacibka ku sigtay inuu naftiisa ku waayo haddii aanay si degdeg ah u faragelin waaxda caafimaadka.
Eriksen ayaa maray baaritaano badan oo dhanka caafimaadka ah si loo ogaado in uu sii wadan karo kubada cagta iyo in kale, waxaana sidoo kale lagu sameeyay qaliin iyada oo la dhax dhigay qalab yar oo lagu xakameynayo garaaca wadnaha.
Haddaba Inter Milan ayaa war rasmi ah ay soo saartay waxay uga mahadcelisay Christian Eriksen waqtigiisa kooxda, waxayna ku dhawaaqday inay joojisay qandaraaska kaddib markii ay labada dhinac gaareen heshiis.
Christian Eriksen ma uusan ku dhawaaqin inuu ka fariistay kubadda cagta, laakiin ma awoodo inuu u ciyaaro Inter Milan sababa la xiriira in sharciga xiriirka Talyaaniga uu diidayo ciyaartoyda wadno xanuunka qaba inay ciyaaraan kubadda cagta, taas oo ku kaliftay inuu ka tago Nerazzurri ugu dambeyntii.
Klopp oo ka hadlay fikirkiisa ku aadan suurtagalnimada lagu joojin karo horyaalka Premier League
Horudhac: Leeds United vs Arsenal... (Gunners oo ciyaareysa Premier League iyadoo ku jirta afarta sare markii ugu horreysay tan iyo...)